सुर्खेतमा हिजो दिउँसो घटेकाे यस्ताे दु:खद घटना ! – List Khabar
Home / समाचार / सुर्खेतमा हिजो दिउँसो घटेकाे यस्ताे दु:खद घटना !
सुर्खेतमा हिजो दिउँसो घटेकाे यस्ताे दु:खद घटना !
admin6days ago समाचार Leaveacomment 92 Views
बुधबार दिउँसो वीरेन्द्रनगरको कपासेमा जीप दुर्घ“ टनामा मृ- तक र घा-इतेहरूको पहिचान खुलेको छ ।
मृ- त्यु हुनेमा रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका-२ का २८ वर्षीय धर्मराज बुढाथोकी रहेका छन् । उनको घ-टना स्थलमै मृ- त्यु भएको थियो । साथै घा- इते हुनेमा अछामको तर्माखाद-२ का २७ वर्षीय तुल्सी रावल बिसी टाउकोमा चो- ट लागेको छ उनलाई उपचारका लागी प्रदेश अस्पताल कालागाउँ लगिएको छ ।
यस्तै भैरवस्थान तुर्माखाद गाउँपालिका-२ अछामका ३ वर्षीया दिदिसा बुढा, कोहलपुर नगरपालिका-२ बाकेका ३१ वर्षीय भोज बहादुर घले, टिकापुर नगरपालिका-२ कैलालीकी सरस्वती विष्ट रहेका छन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-१४ रातानाङ्गलामा रहेको मौसमी राडरको मर्मतमा सकेर वीरेन्द्रनगरतर्फ फर्किँदै गरेको जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय कोहलपुर बाँकेको गाडी कपासेदेखिमाथिल्लो मोडमा दुर्घ“ टनामा परेको थियो । बा१झ ८७८४ नम्बरको बोलेरो जीपमा सडकबाट करिब २० मिटर तल खसेको थियो ।
याे पनि, काठमाडौंको धाराको पानीमा दि`सामा पाइने संक्रामक जिवाणु फेला परेको छ । काठमाडौंमा बागबजारमा आइतबार है`जा पुष्टि भएका दुई महिलामा धारा र ट्युवबेलको पानीबाट है`जा संक्रमण भएको पुष्टिसँगै गरिएको नमुना परिक्षणमा दि`सामा पाइने ‘फि`कल इ`कोली’नामक जीवाणु फेला परेको हो ।
साथै , है`जा देखिएका अन्य स्थानमा पनि पानीको नमुना परिक्षण भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख वसन्त अधिकारी जानकारी दिएका छन् ।
पानीबाट है`जा संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पानी उमालेर मात्रै पिउन र जथाभाबी खानेकुरा नखान आग्रह गरेको छ ।
Previous बूढानीलकण्ठ र सानेपामा पनि हैजा
Next काठमाडौंको बागबजारका यस्तो भयो ! कसरी पिउने पानी ?